Dowlada Ingariiska oo ku dhawaaqday in ay u tababareysa ciidamo Soomaaliya | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii Dowlada Ingariiska oo ku dhawaaqday in ay u tababareysa ciidamo Soomaaliya
Dowladda UK ayaa sheegtey in in kabadan 500 Askri u tababartey Dowladda Soomaalia kuwaas oo dhawaantaan uu Tababar looga soo Afmeerey Magaalada Baydhabo ee Caasimadda Gobalka Baay.
UK ayaa Tilmaantey dhamaan militeriga ay u tabartey Dowladda Soomaalia ay yihiin ku Efenteri ah ama dhulka kuwaas oo U jeedkooda uu yahay in Dagaalamayaasha Al shabaab ay ka saaraan dhulka ay maamulaan Dagaalamayaasha Al shaab.
Qaar kamid ah Ciidamadaani ayaa loo tababarey latacaalida Miinooyiinka ay dhulka ku aasaan Dagaalamayaasha Ururka Al shabaab si ay Ciidamada ugu fufudaato sii Amba qaadida Hawgalo la sheegey in ay Damac santahay Dowladda dhexe Gaar ahaan Xoogaga Qaranka ee Jooga Deegaanada KGS.
Dowladda UK ayaa waxaa ay intaasi ku dartey in Ciidamada ay u tababartey Dowladda Soomaalia ay Durba u dhameystirtey Dareeskooda iyo Qalabkii ay ku sagaalami lahaayeen
haatan ay Diyaar u yihiin Fulinta hawlaha loo igmaday.
Danjiraha UK u jooga Soomaalia Ben Fender ayaa waxaa uu sheegey in Dowladdiisu ay Taageero siineyso amaba ay siiwadi donto Taageerada la siineyo Dowladda dhexe.
Wasiirka UK ee Afrika, James Duddridge MP, ayaa dhawaan hoosta ka xariiqay sida ay Britain uga go’an tahay sii wadista Soomaaliya iyadoo la siineysa taageero cusub oo ku kacaya worth 21.8 million. Xirmada waxaa ka mid ahaa million 1.6 milyan oo looga hortagayo
qatarta ka imaanaysa qaraxyada miinooyinka lagu aaso waddooyinka, iyo £ 3.37 milyan oo dheeri ah oo loogu talagalay ciidamada amniga Soomaaliya ee ku jira howlgalada wadajirka ah ee ay la leeyihiin Howlgalka Midowga Afrika ee Soomaaliya (AMISOM).
Previous articleMadaxweyne Qoor Qoor iyo Cali Guud laawe oo la kulmay Wasiiradaha Hawiye
Next articleSargaal kasoo goostay dagaalyahanada Al Shabaab oo lasoo bandhigay
Saynisyahanno u dhashay Scotland oo aqoonsaday laba xaaladood oo loo...
Saynisyahanno u dhashay Scotland ayaa aqoonsaday laba xaaladood oo loo malaynayo in aadamuhu u gudbiyay Covid-19 bisadahooda. Baadhayaasha Jaamacadda Glasgow ayaa sheegay in labada bisadoodba...
Maxkamadda ciidamada qalabka-sida Puntland oo xukun ku riday wariye Kilwa Aadan...
Wasiirkii hore ee qorsheynta Soomaaliya “Kalitaliye Farmaajo wuxuu ku dhacay bohoshii...